Daawo Dugsiga Lamahuraan Collage Oo Ceerigaabo Dood Ugu Qabtay Ardayda Dhigata Dugsigaasi
January 18, 2018, 6:58 pm
Daawo Xildhibaan Case Warsame Oo Ka Hadlay Dhibaatada Ka Dhalan karta Joojinta Ka Ganacsiga Kaluunka
Ururka Qareenada Somaliland Oo Qareenka Guud Ee Xukuumada Eedo U Jeediyey + Muuqaal
Ururka Qareenada Somaliland Oo Qareenka Guud Ee Xukuumada Eedo U Jeediyey
” Suldaan Cune Car Yaa Xidhi Kara …” Madax Dhaqameed U Hanjabey Xukuumada + Muuqaal
Daawo DEG DEG–SULDAANKA GUUD EE SACAD MUUSE OO SHAKI GELIYAY SANDALADA SULDAAN XASAN
Wasiirka Biyaha Somaliland Iyo Wafti Uu Hogaaminaayo Oo Maanta Booqasho Ku Tagay Deeganka Tuko-raq Ee Gobalka Sool
Wasiirka biyaha Somaliland Md Saleeban Cali Koore
iyo wafti uu hogaaminaayo ayaa waxaa uu maanta booqasho ku tagay deeganka Tuko-raq ee gobalka Sool oo dhawaan ciidamada qaranka Somaliland la wareegeen .
Wasiirkan ayaa dhalasho ahaan ka soo jeeda deegankaas isla markaana shalay ayaa si kulul uu uga hadley xaalada magaalada Tuko-raq isaga oo ku hanjabey hadii maamulka Puntland ay dagaal soo qadaan in magaalada Garoowe iyo Laascaanood mid uun laga qixi doono
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa weli ku guda jira safar uu ku marayo qeybo ka mid ah dalka, wuxuuna la kulmayaan soo dhoweyn ballaaran.
Hadaba madaxweyne Farmaajo waxaa amnigiisa sugaya ciidammo Soomaali ah. Waa markii ugu horeysay tan iyo markuu bilowday dagaalka Al-Shabaab.
“Sida heerka sare ah ee loo xoojiyay ammaanka Madaxweynaha Soomaaliya ee socdaalka ku maraya goblada dalka, tusaale ma u tahay in dalka uu ka maarmayo ciidammo shisheeye?”ayuu is weydiiyay Xasan Xayle oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Safarka madaxweynaha wuxuu ka bilowday Garowe halkaas oo ay ku ilaalinayeen ciidammo ka raacay Muqdisho iyo kuwa maamulka Puntland.
Image captionMadaxweynaha oo ku dhexjira dad shacab ah oo ku soo dhoweeyay Gaalkacyo.
Militariga Soomaaliya “uma diyaarsana dagaal”
Xasan Xayle wuxuu yiri: “Waxaa aad u muuqatay, ka sokow soo dhaweenta diiran, sida ay ciidamada ammaanka ee Jooga magaalooyinka uu booqday Madaxweynuhu u hubeysanyihiin una abaabulanyihiin ee ay u ilaalinayaan nabadgelyada iyagoo si aad ah u xajinaya ammaanka Madaxweynahay iyo martida la socota”.
Lahaanshaha sawirkaMAHAMAD YUSUF TIGAY
Image captionCiidammo saaray buuraha dushooda oo sugaya amniga madaxweynaha
Ka dib wuxuu u gudbay dhanka Gaalkacyo illaa cadaado, wuxuuna u sii tallaabay magaalada Dhuusamareeb.
“Arrintan waxay dhalisay su’aasha ah: Soomaaliya ma waxay xagga ammaanka ku dhawaatay in ay ka maaranto joogitaanka ciidamada shisheeye”, ayuu yiri.
Image captionMadaxweyne Farmaajo, Gaas iyo Xaaf oo ku wada sugan Gaalkacyo
Ciidammada sida rasmiga loo og yahay ee Soomaaliya ka howlgala waa kuwa AMISOM oo hadda isu diyaarinaya in ay ka baxaan Soomaaliya.
Balse waxaa la sheegayaa in ay joogaan ciidammo kale oo ka kala socda Mareykanka, Britain, Turkiga iyo dalal kale.
“Si kastaba, waxay ila tahay in aan weli la gaarin waqtigii ay noqon laheyd in laga wada kaaftoomo gacanta dhinaca ammaanka ee laga helo Beesha Caalamka, gaar ahaan ciidammada AMISOM”, ayuu ku taliyay Xasan Xayle oo ka faalloodo
Xisbiga UCID Oo Cabasho Ka Muujiyey Ciidanka Nabad Gelyada Wadooyinka + Muuqaal
Xisbiga UCID Oo Cabasho Ka Muujiyey Ciidanka Nabad Gelyada Wadooyinka
Deg Deg :- ” Laascaanood Iyo Garoowe Mid Uun Baa Laga Qaxi Doonaa ..” Wasiirka Biyaha Somaliland Oo Hanjabey + Muuqaal
Wasiirka wasaarada biyaha Somaliland Md Saleeban Cali Koore oo
maanta xafiiskiisa kula Hadley qeybo ka mid ah warbaahinta waxaa uu hadalo hanjabaad u muuqata uu hawda u mariyey maamulka Puntland .
Wasiirkan oo ka soo jeeda gobalada bariga Somaliland ayaa waxaa uu maamulka Garoowe ugu hanjabey hadii ay joojin wayaan waxay wadaan in Garoowe iyo Laascaanood mid uun laga qaxi doono , isla markaana Somaliland ay diyaar u tahay in ay isdifaacdo